Tsatok'antsy teny Anosibe :: Lehilahy namono ny vadiny sy nandratra olona telo • AoRaha
Nandriaka ny ra, teny Anosibe Andrefana, tamin’ny alin’ny alarobia. Namoy ny ainy notsatohan’ny lehilahy iray, 27 taona, tamin’ny antsy ny vadiny. Noratrainy tamin’ny antsy ihany koa ny tompon-trano.
Olona telo no naratra tamin’io herisetra nataona lehilahy io. Voasambotra itsy farany ary saika niharan’ny fitsaram-bahoaka. Naheno vehivavy nihiaka mafy niantso vonjy ny tompon-trano tao amina trano iray tenyAnosibe, tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany alina. Nivoaka ihany koa ny mpiray vodirindrina nijery ny zava-misy. Fantatra fa tao amin’ny mpivady mpanofa trano no niavian’ny hiaka.
“Tonga nanavotra ny olona saingy notsenain’ilay lehilahy mpanofa trano tamin’ny antsy. Voa sy naratra ny olona telo. Vehivavy iray nihoson-dra efa tsy nisy aina intsony, nitsitra teo ambony fandriana, no hita tao an-trano. Mbola nisy antsy nilentika lalina teo amin’ny tratrany tandrifin’ny fony. Hita teo ihany koa ny antsy iray nandratrarana an’ireo olona telo. Ilay lehilahy kosa nandositra. Voasambotry ny fokonolona izy”, hoy ny polisy ao amin’ny Borigady misahana ny heloka bevava (BC).
Teo imason’ny ankizy
Nahita ny zava-niseho ny ankizivavy roa, zanak’izy mivady ireo, ka nampandre haingana ny fianakaviana. “Tamin’ny 11 ora alina teo izy roa vavikely no tonga tety aminay nitantara ny zava-nisy. Milaza ho nodarohan’ny rainy sy nohitsakitsahany teo ambony fandriana ny iray tamin’izy ireo”, hoy ny havan’ireto niharam-boina mipetraka, eny Anosipatrana.
Nentina tany amin’ny hopitaly ireo maratra. Voatazona eny amin’ny Polisin’ny BC eny Anosy ilay voarohirohy. “Fantatra fa efa ho herintaona no nisy ady sy fifampikasihan-tanana teo amin’ireo mpivady ireo. Nilaza ilay lehilahy fa noho ny fanesoesoan’ny vadiny azy matetika no nahatonga ny fahatezerany sy nahavitany namono. Nokasainy hovonoina ihany koa ireo tompon-trano”, araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny mpanao famotorana.
Fanamboaran-dalana namoa-doza Roa lahy maty tototry ny tany tany Ankazondandy
Famoahana sary mamoafady Mbola misy olona hafa karohin’ny zandary
Fandrobana « Cash point » :: Kisarisarim-panafihana ilay niseho teny Itaosy
Fanafihana nisesy :: Maty voatifitra ny roa lahy nandroba fiara sady nangalatr’omby